भीमफेदी गाईजलाई ‘झट्का’ लगाउने यी को हुन् ? भिडियोमा हेर्नुस् - Purbeli News
भीमफेदी गाईजलाई ‘झट्का’ लगाउने यी को हुन् ? भिडियोमा हेर्नुस्
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १३, २०७४ समय: १९:२०:३१
नेपालि म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समय देखीरहने एउटा ग्रुप हो भीमफेदी गाईज । युट्युब मा कभर भिडियो बनाउदै चर्चामा आएको यो ग्रुप अहिले निकै व्यस्त र चर्चित ग्रुप मध्ये एक पर्छ । हालै यसै ग्रुप फिचर भएको एक भिडियो सार्बजनिक भएको छ ।
निकै रमाईलो र फरक कन्सेप्टमा निर्माण भएको भिडियोका सबै दृश्यहरु एक रुम भित्र हरेक स्वरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । राजेश थपलिया र मिना निरौलाको युगल आवाज रहेको ‘झट्का लाग्यो मलाई’ बोलको पप शैलीको गीतमा गायक थापलियाकै शब्द तथा संगीत समाबेश गरिएको छ ।
फेदी गाईज यो पालि भने अघिल्ला भिडियो भन्दा अलि फरक रुपमा प्रस्तुत भएको हो । द मोण्टाजका पवन सुस्लिङ्गली छायांकन गरेको भिडियोलाई भीमफेदी गाईजकै निर्मल लामाले निर्देशन गरेका छन् । भिडियोमा भीमफेदी गाईजलाई रिना, पासाङ्ग र अन्जलीले साथ् दिएकि छिन । भिडियोलाई संगीत बानियाले सम्पादन गरेका हुन् ।